မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် နေရာကို ကင်ဂျုံအန် ရဲ့ ညီမ ဖြစ်သူ ကင်ယိုဂျောင် ဆက်ခံတော့ မှာ သေချာနေပြီလား….??? – Zartiman
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်ဟာ ပါတီ ထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ၊ တပ်မတော်ဘက်က ထိပ်သီးအရာရှိတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေး နွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကနေ အဖြေတစ်ခု ရခဲ့ပုံရှိပြီး၊ ဒါမှမဟုတ် မြောက်ကိုရီးယား အပေါ် သြဇာသက်ညောင်းတဲ့ တတိယနိုင် ငံတစ်ခုခုက အကြံပေးတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ တောင်ကိုရီးယားဘ က်ကို ကြဲချခဲ့တဲ့ ဝါဒဖြန့်စာတွေ ကိစ္စ ပါ။ အဲဒီဝါဒဖြန့်စာရွက်တွေမှာ ပုံနှိပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကတော့ မြောက်ကိုရီးယားကို တည်ထောင်သူ ကင်အီဆောင်၊ ကင်ဂျုံအန်နဲ့ သူရဲ့ညီမဖြစ်သူ ကင်ယိုဂျောင်တို့ရဲ့ပုံကို ဦးစားပေး ဖော်ပြ ထားတာပါ ။
ဒါကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြနေတဲ့အတိုင်း ကင်ယိုဂျောင်ဟာ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ နံပတ် (၂)ခေါင်းဆောင် ဆိုတာ သေချာ သွားပြီ လို့ ယူဆနေကြပါတယ် ။တောင် မြောက် နယ်စပ်က နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ရုံး ကို မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ဖောက်ခွဲဖြို ချလိုက်ပြီးနောက် တောင်-မြောက်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ရုတ်ချည်းဆိုသလို တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားက တောင်အနေ နဲ့ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှု စံနှုန်းတွေကို လိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်လို့၊ စစ်ရေးအရ အရေးယူပြီး ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် မယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားကလည်း မြောက်ကိုရီးယား တို့အဖို့ နောင်တရဖို့ ရှိနေပြီလို့ သတိပေးခဲ့ပြီး၊ နယ်စပ်ကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အင်အားတွေ အ မြန်ဖြည့်တင်းလိုက်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယား ဘက် ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကပဲ နယ်စပ်အနီးမှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ ဆက်တိုက် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အိန္ဒိယ-တရုတ် ပဋိပက္ခ ကျေအေးအပြီးမှာ မြောက်ကိုရီးယား ကလည်း စစ်တပ်တွေ ရုပ်သိမ်းသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဒီမတိုင်ခင်က တောင်ကိုရီးယားနယ် အတွင်းကို ဝါဒါဖြန့်စာတွေ မိုးပျံဘောလုံးတွေ၊ မိုးပျံလေအိတ်တွေ နဲ့ ဖြန့်ဝေ လွှင့်တင်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
နယ်စပ်မှာ ဧရာမ Loud Speaker တွေနဲ့လည်း ဝါဒဖြန့်အသံတွေ လွင့်တင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကင်ဂျုံအန်ဟာ တောင်ကို အနှောက့် အယှက် ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ရပ်ဆိုင်း လိုက် တာပါ။
လေးစားမှုဖြင့် ခရစ်ဒက် (လင်းသုတ)
မွောကျကိုရီးယား ခေါငျးဆောငျ နရောကို ကငျဂြုံအနျ ရဲ့ ညီမ ဖွဈသူ ကငျယိုဂြောငျ ဆကျခံတော့ မှာ သခြောနပွေီလား….???
မွောကျကိုရီးယားခေါငျးဆောငျ ကငျဂြုံအနျဟာ ပါတီ ထိပျသီးပုဂ်ဂိုလျကွီးတှေ ၊ တပျမတျောဘကျက ထိပျသီးအရာရှိတှနေဲ့ တိုငျပငျဆှေး နှေးမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီကနေ အဖွတေဈခု ရခဲ့ပုံရှိပွီး၊ ဒါမှမဟုတျ မွောကျကိုရီးယား အပျေါ သွဇာသကျညောငျးတဲ့ တတိယနိုငျ ငံတဈခုခုက အကွံပေးတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ထူးခွားခကျြကတော့ တောငျကိုရီးယားဘ ကျကို ကွဲခခြဲ့တဲ့ ဝါဒဖွနျ့စာတှေ ကိစ်စ ပါ။ အဲဒီဝါဒဖွနျ့စာရှကျတှမှော ပုံနှိပျထားတဲ့ ဓာတျပုံတှေ ကတော့ မွောကျကိုရီးယားကို တညျထောငျသူ ကငျအီဆောငျ၊ ကငျဂြုံအနျနဲ့ သူရဲ့ညီမဖွဈသူ ကငျယိုဂြောငျတို့ရဲ့ပုံကို ဦးစားပေး ဖျောပွ ထားတာပါ ။
ဒါကို ထောကျရှုခွငျးအားဖွငျ့ သတငျးတှမှော ဖျောပွနတေဲ့အတိုငျး ကငျယိုဂြောငျဟာ မွောကျကိုရီးယားရဲ့ နံပတျ (၂)ခေါငျးဆောငျ ဆိုတာ သခြော သှားပွီ လို့ ယူဆနကွေပါတယျ ။တောငျ မွောကျ နယျစပျက နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေး ရုံး ကို မွောကျကိုရီးယားဘကျက ဖောကျခှဲဖွို ခလြိုကျပွီးနောကျ တောငျ-မွောကျနှဈနိုငျငံရဲ့ ဆကျဆံရေးဟာ ရုတျခညျြးဆိုသလို တငျးမာမှုတှေ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ မွောကျကိုရီးယားက တောငျအနေ နဲ့ နှဈနိုငျငံသဘောတူညီမှု စံနှုနျးတှကေို လိုကျနာဖို့ ပကျြကှကျလို့၊ စဈရေးအရ အရေးယူပွီး ဝငျရောကျတိုကျခိုကျ မယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
တောငျကိုရီးယားကလညျး မွောကျကိုရီးယား တို့အဖို့ နောငျတရဖို့ ရှိနပွေီလို့ သတိပေးခဲ့ပွီး၊ နယျစပျကို စဈဘကျဆိုငျရာ အငျအားတှေ အ မွနျဖွညျ့တငျးလိုကျပါတယျ။ မွောကျကိုရီးယား ဘကျ ကလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ရကျတှကေပဲ နယျစပျအနီးမှာ စဈရေးလကေ့ငျြ့မှုတှေ ဆကျတိုကျ လုပျခဲ့ပါတယျ။ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ အိန်ဒိယ-တရုတျ ပဋိပက်ခ ကအြေေးအပွီးမှာ မွောကျကိုရီးယား ကလညျး စဈတပျတှေ ရုပျသိမျးသှားတာ ဖွဈပါတယျ။မွောကျကိုရီးယားဟာ ဒီမတိုငျခငျက တောငျကိုရီးယားနယျ အတှငျးကို ဝါဒါဖွနျ့စာတှေ မိုးပြံဘောလုံးတှေ၊ မိုးပြံလအေိတျတှေ နဲ့ ဖွနျ့ဝေ လှငျ့တငျခဲ့တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။
နယျစပျမှာ ဧရာမ Loud Speaker တှနေဲ့လညျး ဝါဒဖွနျ့အသံတှေ လှငျ့တငျခဲ့ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကငျဂြုံအနျဟာ တောငျကို အနှောကျ့ အယှကျ ပေးနတေဲ့ အစီအစဉျတှကေို ရပျဆိုငျး လိုကျ တာပါ။
လေးစားမှုဖွငျ့ ခရဈဒကျ (လငျးသုတ)